Pun Hlaing Lifestyle March Ed. A Month of Mindfulness
Dear Residents, Members & Friends
Whatagreat turn out on the opening of the Bamboo House last month! We thank you for joining us and we will look forward to making Pun Hlaingaplace of serenity and peace for our residents. So this month, we shall focus on 17 activities that will enhance the mental, physical and emotional well-being of our residents and members.
Enjoy reading and we look forward to receiving your feedback on this issue!
ချစ်ခင်လေးစားရပါသော အိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သူများ၊ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် မိတ်ဆွေများ ခင်ဗျာ/ရှင်။
ယခင်လက ဝါးအိမ်လေးကို အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လာရောက်အားပေးကြသူများကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ ပန်းလှိုင်အိမ်ရာကို နေထိုင်သူတွေအတွက် တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ ရပ်ဝန်းလေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားပါ့မယ်။ ယခုလအတွက်တော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာများအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် အစီအစဉ် ၁၇ မျိုးကို အိမ်ရာနေသူများနှင့် မန်ဘာများအတွက် ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
1. VITAMIN SUNSHINE
A sunny day out with your family. Your own farm to table home experience. Your favourite veggies at our veggie farm. MMK1,000 for 1 kg. Open daily from 8 to4except Sunday. For more info, call 09795200527.
နေသာတဲ့နေ့လေးမှာ ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့ မိသားစုနဲ့အတူတူ farm to table အရသာလေးကို ခံစားနိုင်ဖို့ ပန်းလှိုင်အိမ်ရာရဲ့ veggie farm ရှိလို့နေပါပြီ။ မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို 1 kg ကို မြန်မာငွေ ၁၀,၀၀၀ ကျပ်ဖြင့်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက 09795200527 သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
2. SOUPED UP
Mohinga, the Asian noodle soup we love! A tangy, catfish-based noodle soup, thickened with chickpea topped with spicy, crispy and fresh garnishes Served all day at Bamboo House. MMK3,000 per serving.
အာရှဟင်းလျာတွေထဲမှာ ထိုးဖောက်နိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မုန့်ဟင်းခါးကိုတော့ လူတိုင်းနီးပါးကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ငါးကိုအဓိကထားပြီး ကုလားပဲရောထည့်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ ဟင်းချိုဟာ အနံ့အရသာနဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့အပြင် ငရုတ်သီး၊ နံနံပင်တို့ ထည့်ပြီးတော့လည်း စိတ်တိုင်းကျ သုံးဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဝါးအိမ်လေးမှာ တနေကုန် ရရှိတဲ့အပြင် တပွဲကို ၃,၀၀၀ ကျပ်နှင့် ဝယ်ယူသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
3. BUILD A BADASS BUSINESS WITH DIANE SANFILIPPO‬
"Join Diane Sanfilippo - 2x New York Times bestselling author and serial entrepreneur - for business tips, advice, and motivation for emerging or existing business owners. You'll learn practical strategies from Diane as well as hear expert interviews with those who have had similar struggles and have found success."
New York Times ရဲ့ အရောင်းရဆုံး စာရေးဆရာ အဖြစ် ၂ ကြိမ်တိုင်တိုင် အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရပြီး စွန့်ဉီးတီထွင်သူလည်းဖြစ်တဲ့ Diane Sanfilippo က စီးပွားရေး စလုပ်ခါစ လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသူတွေအတွက် စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ၊ အကြံဉာဏ်တွေနဲ့ စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို မျှဝေပေးထားပါတယ်။ Diane က လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာ အခက်အခဲကြုံတွေ့ရတာတွေ၊ အောင်မြင်မှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်း ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့အတူ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အင်တာဗျူးတွေကနေတဆင့်လည်း လက်တွေ့မှာ အသုံးချနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို လေ့လာနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နားထောင်ရန်လင့်ခ် : https://dianesanfilippo.libsyn.com/podcast
4. MASTER THE ART OF PALM PUSH
Push your palm together for 5-10 seconds. In so doing the body gets intoaproprioceptive input, giving the body an instant reach to calmness.
လက်ဖဝါး ၂ ဖက်ကို ၅-၁၀ စက္ကန့်ကြာအောင် ဖိထားကြည့်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် proprioceptive input ဆိုတာကို ရရှိပြီး စိတ်တည်ငြိမ်မှုကို ခဏအတွင်းမှာပဲ ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
5. GRILLED CHEESE SANDWICH DAY
Simplicity is what makeagood grilled cheese sandwich. All you need is bread and cheese. A mean version is served at Bamboo House. Retail at MMK5,000 per portion!
မီးကင်ထားတဲ့ ချိစ်ဆန်းဒေ့ဝချ်လေးအတွက် ပေါင်မုန့်ကောင်းကောင်း၊ ချိစ်ကောင်းကောင်းတော့ လိုအပ်တယ်နော်။ ဝါးအိမ်လေးမှာ တခုကို ၅၀၀၀ ကျပ်နဲ့ရောင်းချပေးနေပါတယ်။
PUN HLAING COUNTRY CLUB MEMBERSHIP
We'd love to have you join our country club! Choose the package that best suits you and your lifestyle. Email countryclub@memoriesgroup.com or call +95 (0) 13687664 or Ext: 1514 for free consultation.
ပန်းလှိုင်အိမ်ရာမှာရှိတဲ့ country club မှာ အဖွဲ့ဝင်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အစီအစဥ်တွေမှာ ပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ လူနေမှုပုံစံနဲ့အကိုက်ညီဆုံးသော package များကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ +95 (0) 13687664 သို့မဟုတ် Ext: 1514 သို့အခုပဲ ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းလိုက်ပါ။
PUN HLAING GOLF CLUB MEMBERSHIP
Come and be part of our golfing family. We have individual, couple, corporate membership & weekdays and weekends options to suit every budget and lifestyle. Special rate apply for Myanmar nationals, kindly contact us at +95 (0) 99566 59875 or phgc@yomaland.com for more info.
ဂေါက်ရိုက်အားကစားဝါသနာရှင်များအားလုံးကို ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းမှ နွေးထွေးစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့အတွက် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း၊ စုံတွဲ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပိတ်ရက်နှင့်ကြားရက်များ စသည်ဖြင့် ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီး ရှိလို့နေပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ အသုံးစရိတ်၊ နေထိုင်မှုပုံစံတွေပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်စရာတွေအမျိုးမျိုးရှိတာမလို့ အခုပဲ +95 (0) 99566 59875 သို့မဟုတ် phgc@yomaland.com သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းလိုက်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက်လည်းအထူးစျေးနှုန်းတွေရှိပါတယ်။
6. CALORIES BURNED CLEANING HOUSE
Increase the number of calories burned when you clean your own place! For example, if you need to carry your laundry basket from floor to floor, useawalking lunge to ascend the stairs!
နေအိမ်လေးကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရင်းနဲ့ ကယ်လိုရီတွေ ပိုမိုလောင်ကျွမ်းသွားအောင် ပြုလုပ်လိုက်ပါ။ ဥပမာအဝတ်ခြင်းကို အောက်ထပ်ကနေ အပေါ်ထပ်ကို သယ်ဖို့ လိုအပ်လာပြီဆိုရင် လှေခါးကနေ ရိုးရိုးတက်သွားတာထက် walking lunge ပုံစံကို အသုံးပြုပြီး အတက်အဆင်းလုပ်တာမျိုးက ကယ်လိုရီတွေကို ပိုမိုလောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။
PERSONALISED CLEANING SERVICES
The best way to ensure your home is always clean is by hiring our cleaning services. Give us as many instructions as you’d like, and we will buildaplan to your expectation! Dial0from within the estate for your free consultation.
မိမိရဲ့ နေအိမ်လေးကို အမြဲတမ်းတောက်ပြောင်သန့်ရှင်းလှပနေဖို့ဆိုရင် ပန်းလှိုင်အိမ်ရာက အိမ်သန့်ရှင်းရေး ဝန်ဆောင်မှုကို သတိရလိုက်ပါ။ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း စိတ်တိုင်းကျ သန့်ရှင်းတောက်ပြောင်သွားအောင် ပြုလုပ်ပေးဖို့ အဆင်သင့်ရှိလို့နေပါတယ်။ Ext နံပတ်0ကို ခေါ်ယူပြီး ဝန်ဆောင်မှု ရယူရန်အတွက် အခမဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Honor all the smart, hardworking, kind, hilarious, compassionate women in your life. Invite her forapoolside dinner at Oasis Bistro. To book, call 01 687664.
ကိုယ်ရဲ့ဘဝထဲက ထက်မြက်ကြိုးစားပြီး ကရုဏာတရားလည်းရှိ ပျော်ရွှင်အောင်လည်းပြုလုပ်ပေးလေ့ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးကို ဂုဏ်ပြုပေးသင့်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ မတ်လထဲမှာရှိတယ်နော်။ သူမကို Oasis Bistro ရဲ့ ရေကူးကန်ဘေးမှာ ညစာစားပွဲလေးပြုလုပ်ပြီး တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်လေးတွေကို ကုန်ဆုံးလိုက်ပါ။ ဘိုကင်ပြုလုပ်လိုပါက 01 687664 ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Rent Your Next Home in Yangon
Yoma Land rentals isafull-service real estate marketplace with properties at Pun Hlaing golf estate. We go the extra mile to take care of all the details for tenants and home-owners so their precious time can be fully devoted to living life the way they love and prides itself on being one of the most progressive property management in our areas of service. We are driven by the satisfaction of our clients.
More information: https://www.punhlaingestate.com/availability
Contact +95 (9) 777229339 or email punhlaingrentals@yomaland.com
8. PERSONAL ENRICHMENT
Guest blogger Aleah Kristin Gardner shared "How Remote Working Will Affect the Future of Real Estate" inarecent blog post. "It implies that tech doesn't need to be anywhere, de-emphasizing commutes and the need for office space altogether." Read more here: https://www.yomaland.com/post/how-remote-working-will-affect-the-future-of-real-estate
ဘလော့ဂါတစ်ဉီးဖြစ်တဲ့ Aleah Kristin Gardner က Remote Working ပြုလုပ်ခြင်းက အနာဂတ်မှာ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းကို ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပြောကြားထားပါတယ်။ “နည်းပညာက နေရာတိုင်းမှာ မလိုအပ်ဘူးဆိုတာကို ညွှန်ပြနေတယ်။ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးတွေ၊ ရုံးခန်းနေရာတွေကိုလည်း အာရုံစိုက်မှု လျော့ချနိုင်တယ်”လို့ ဆိုသွားပါတယ်။ အသေးစိတ်ဖတ်ရှုရန် : https://www.yomaland.com/post/how-remote-working-will-affect-the-future-of-real-estate
9. HAPPIER WITH GRETCHEN RUBIN
"Gretchen Rubin is HAPPIER, and she wants you to be happier too. The #1 bestselling author of The Happiness Project and Better Than Before gets more personal than ever as she brings her practical, manageable advice about happiness and good habits to this lively, thought-provoking podcast. Gretchen’s cohost and guinea pig is her younger sister, Elizabeth Craft,aTV writer and producer living in Los Angeles, who (lovingly) refers to Gretchen as her happiness bully."
Gretchen Rubin က ပိုမိုပျော်ရွှင်လာပါတယ်တဲ့။ သူမလိုပဲ သင့်ကိုလည်းပျော်ရွှင်စေချင်ပါတယ်တဲ့။ အရောင်းရဆုံး နံပတ် ၁ စာရင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ The Happiness Project and Better Than Before စာအုပ်ကို ရေးသားသူက ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူမရဲ့ လက်တွေ့အသုံးချတဲ့နည်းလမ်းတွေ၊ အကြံဥာဏ်တွေ၊ အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေ ကို podcast မျှဝေထားပါတယ်။
နားထောင်ရန် : https://gretchenrubin.com/podcasts/
Dive intoaheaping plate of creamy, indulgent carbonara AT Bamboo House. Priced at MMK5,000 per serving, no reason not to dress up and travel to Bamboo House for an Italian feast.
အနှစ်တွေအများကြီးပါဝင်ပြီး အရသာနဲ့လည်းပြီးပြည့်စုံတဲ့ carbonara ကို ဝါးအိမ်လေးမှာ ၅၀၀၀ ကျပ်တည်းနဲ့ မှာယူသုံးဆောင်နိုင်ပြီနော်။ အီတလီအရသာကို အပြည့်အဝခံစားနိုင်ဖို့ ဝါးအိမ်လေးကို လှမ်းလာခဲ့လိုက်တော့နော်။
11. FOREST BATHING
Slow down and become immersed in the natural environment with all your senses. Take deep measured breaths as you walk around the estate. By focusing all your senses on the trees, the birds, the air, you will achieveasense of serenity and calmness not felt before. PS For safety reason, please do not walk in the gold course!
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အလှတရား၊ သာယာချမ်းမြေ့မှုတွေကို အာရုံ ၅ ပါးကို အသုံးပြုပြီး အပြည့်အဝခံစားကြည့်လိုက်ပါ။ အိမ်ရာဝင်းအတွင်း လမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်မှာ လတ်ဆတ်သန့်ရှင်းတဲ့ လေကို တဝကြီးရှုသွင်းကြည့်ပါ။ စိမ်းစိုတဲ့သစ်ပင်တွေ၊ ကျေးငှက်တွေ၊ လတ်ဆတ်တဲ့လေတွေကို အသေအချာ ဂရုစိုက်ပြီး ခံစားကြည့်ရင် ယခင်ကမရဘူးတဲ့ အေးချမ်းတဲ့ ခံစားမှုကို ရရှိလာပါလိမ့်မယ်။ မှတ်ချက် ။ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအရ ဂေါက်ကွင်းအတွင်းမှာ လမ်းလျှောက်ခြင်းမပြုလုပ်ကြရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။
12. THE ULTIMATE HEALTH PODCAST
"Jesse Chappus has in-depth conversations with health and wellness leaders from around the world. Topics include lifestyle, nutrition, fitness, self-help, sleep, meditation, spirituality and so much more. Tune in weekly to take your health to the next level!"
Jesse Chappus က ကမ္ဘာအနှံ့က ကျန်းမာရေးနှင့် ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ရေးအစရှိတဲ့ ကဏ္ဏတွေကို အဓိကထားလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့အတူ ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ နေထိုင်မှုဘဝပုံစံ၊ အာဟာရ၊ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှု၊ မိမိကိုယ့်ကိုကူညီဆောင်မမှု၊ အိပ်စက်ခြင်း၊ တရားထိုင်ခြင်း၊ ယုံကြည်သက်ဝင်မှု နှင့် အခြားသော အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါတယ်။ ကျန်းမာကောင်းမွန်တဲ့ လူနေမှုဘဝ ရရှိဖို့အတွက် အပတ်စဉ်နားထောင်မှုပြုလုပ်လိုက်ပါ။
နားထောင်ရန် : https://ultimatehealthpodcast.com/
13. THE MINDFUL MINUTE
"That moment when your meditation teacher says, "pay attention to your breath..." and you secretly think, "WTH does that even mean?!" and spend the meditation writing your grocery list."
တရားထိုင်ခြင်းကို နည်းလမ်းပြတဲ့ ဆရာက ဝင်သက်ထွက်သက်ကို အာရုံစိုက်ပါလို့ ပြောရင် သင့်အနေနဲ့ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ ဆိုပြီး စဉ်းစားမိမှာပါ။ ဈေးဝယ်ရမယ့်စာရင်းကို ပြုလုပ်ရင်း တရားမှတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ကို စမ်းသပ်ပြုလုပ်ကြည့်ပါ။
နားထောင်ရန် : https://www.merylarnett.com/podcast/uncategorized/welcome-to-the-mindful-minute
14. RETAIL THERAPY
Shopping online can improve your mood! While this isashort lived habit, combined with other activities we recommended, can bring about overall relief and increase your happiness index! Try https://www.shop.com.mm
အွန်လိုင်းမှဈေးဝယ်ယူခြင်းကလည်း စိတ်ခံစားမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဈေးဝယ်ယူခြင်းအပြင် ယခုစာစောင်မှာ ညွှန်းဆိုပေးထားတဲ့ အခြားသော အလေ့အကျင့်လေးတွေကိုပါလုပ်ဆောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် စိတ်သက်သာကို ရရှိနိုင်ရုံမက ပျော်ရွှင်မှုလည်းပိုမိုရရှိလာစေနိုင်ပါတယ်။
15. THE HAPPINESS LAB
"You might think you know what it takes to leadahappier life… more money,abetter job, or Instagram-worthy vacations. You’re dead wrong. Yale professor Dr. Laurie Santos has studied the science of happiness and found that many of us do the exact opposite of what will truly make our lives better. Based on the psychology course she teaches at Yale--the most popular class in the university’s 300-year history--Laurie will take you through the latest scientific research and share some surprising and inspiring stories that will change the way you think about happiness."
သင့်အနေနဲ့ ပိုက်ဆံတွေများများရှိတာ၊ ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်ရရှိတာ (ဒါမှမဟုတ်) Instagram မှာ ပုံလှလှလေးတွေတင်လို့ရမယ့် ခရီးတွေသွားလို့ရတာက ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝလို့ သတ်မှတ်ကောင်းသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ အဲ့လိုအတွေးတွေက လုံးဝမှားယွင်းနေပါတယ်။ ပျော်ရွှင်မှုအကြောင်းကို လေ့လာမှုပြုလုပ်နေတဲ့ Yale တက္ကသိုလ်က ပရော်ဖက်ဆာ Dr. Laurie Santos ရဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်အရ လူတော်တော်များများက စစ်မှန်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ရရှိဖို့ ဆန့်ကျင်ဘက်အရာတွေကို ပြုလုပ်နေကြတာတွေ့ရှိရပါတယ်။ Yale တက္ကသိုလ်မှာ သူမသင်ကြားပြသနေတဲ့ စိတ်ပညာဘာသာရပ်ကို အခြေခံပြီး နောက်ဆုံးလေ့လာတွေ့ရှိထားတဲ့ သုတေသနမှတ်တမ်းတွေ၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာတွေအကြောင်းမျှဝေထားတာလေးကို နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အတွေးတွေကို ပြောင်းလဲပေးပါလိမ့်မယ်။
နားထောင်ရန် : https://www.happinesslab.fm/
16. SHOP FRESH
Our shelves at Country Store are stocked with small-batch snacks, your go-to groceries, and great selection of wines.
ပန်းလှိုင်အိမ်ရာရဲ့ Country Store မှာ အဆာပြေမုန့်တွေ၊ စားသောက်ကုန်တွေနဲ့ အကောင်းဆုံးသော ဝိုင်တွေကို ရောင်းချပေးလျက်ရှိပါတယ်။
CONTEMPORARY SEMI-DETACHED VILLAS FOR SALE Lotus Place isacollection of 30 well-designed, spacious and smart semi-detached villas. Sitting onagenerous plot of land (4,037 sq.ft), the open interiors offer ample living spaces. Providingaperfect balance between privacy and accessibility, these thoughtfully created homes are designed for modern family life with space for everyone to grow and to thrive. Call +959 777 229 449 or email: punhlaingsales@yomaland.com for more infornation.
17. FATIGUE STRESS & ME
Many of us are feeling worried and stressed from the current pandemic. It is important for us to identify the signs of stress, to navigate and to handle our emotions. Real Talk Yoma webinar recently addressed these topics and below isasummary of different things you can do to reduce stress and protect yourself from feeling overwhelmed. Read more here: https://www.punhlaingestate.com/post/fatigue-stress-me
ကျွန်ုပ်တို့တော်တော်များများက ယခုလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့် စိတ်ပူပင်မှုတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ခံစားနေရပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို သိရှိပြီး ကောင်းမွန်စွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့က အရေးပါပါတယ်။ Real Talk Yoma ကပြုလုပ်တဲ့ webinar မှာ ၎င်းအကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြသွားပြီး မိမိအနေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုးနည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျော့ချနိုင်မလဲဆိုတာတွေကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ အသေးစိတ်ဖတ်ရှုရန် :
If you would like to contribute any article or share your feedback with us, please send corporatemarketing@yomaland.com your thoughts and suggestions.
ပန်းလှိုင်သတင်းစာစောင်မှာ ဆောင်းပါးထည့်သွင်းလိုလျှင်ဖြစ်စေ၊ အကြံဥာဏ်များပေးပို့လိုလျှင်ဖြစ်စေ corporatemarketing@yomaland.com သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။